Nchedo data yana idobe nzuzo onye ọrụ ga -ekwe omume maka data ha. A ga -enwerịrị ozi ahụ mgbe ọnụnọ ndị sonyere na saịtị ahụ ma ọ bụ mgbe ha na -eji akụrụngwa nke Avalanches Free Social Journalism Project yana ọrụ ya.
Ọ bụghị ụlọ mgbasa ozi. Ndị ọrụ anyị enweghị bọọdụ nchịkọta akụkọ iji dezie akụkọ bara uru. Ọ bụghị naanị akụrụngwa ka ọ dị n'aka maka ihe edere na ibe ya.
Ụkpụrụ nchedo ozi (nke a na -akpọzi amụma) na -ekpuchi data nke ọrụ Avalanches na -enweta n'aka onye ọrụ mgbe ya na akụrụngwa na -emekọ ihe. Onye ọrụ ga -eji ọrụ, ngwaahịa, ma ọ bụ atụmatụ nke Avalanches (nke a na -akpọ Project ma ọ bụ Akụ). Akụ ahụ ga -ejedebe nkwekọrịta ma ọ bụ nkwekọrịta ọ bụla na ndị sonyere ọrụ iji chedo data ha.
Ọrụ Avalanches na -echedo data nke ndị sonyere na ịkwanyere ikike nzuzo ha. Ya mere, Iwu ahụ nwetara nkọwa:
data ndị otu, nke Avalanches Resource haziri
ebumnuche nke nhazi na ịnakọta data mgbe onye ọrụ na -eji Resource Avalanches;
ụkpụrụ nke esi enweta ozi sitere na webụsaịtị Avalanches Project.
N'iji Resource, Onye ọrụ nabatara ma kwenye na nhazi nke data ya n'afọ ofufo. E depụtara ndepụta nke data ndị a na Iwu a. Ọ bụrụ na nghọtahie ebilite, onye sonyere kwesịrị ịkwụsị ịga na webụsaịtị Project ma ọ bụ bịarute na Project na ibe Facebook anyị ozi ozugbo: https://www.facebook.com/avalanches.global
Avalanches na -enyocha ma na -anakọta data nkeonwe na nkwanye ùgwù dị ukwuu. Nke a bụ maka:
data enwetara mgbe onye ọrụ na -edejupụta fọm ndebanye aha, ikike, na njirimara onye ọrụ na saịtị ahụ;
data sitere na faịlụ kuki;
Adreesị IP na ọnọdụ.
A na -echekwa data nkeonwe nke ndị ọrụ Avalanches.com na sava echekwara.
Ndị ọrụ Avalanches.com kwesịrị ịma nke bụ eziokwu na ụfọdụ njikọ ndị ebipụtara na Platform anyị nwere ike ibute akụrụngwa nwere ike adịghị mma (webụsaịtị, ngwa, wdg) na mpụga Platform anyị nke nwekwara ike iwepụta data ha. Platform anyị anaghị ebu ọrụ maka data ewepụtara ma ọ bụ nsonaazụ ọ bụla ọzọ nke iso njikọ mpụga nke ndị ọrụ anyị bipụtara na avalanches.com.
The onye data nke onye Avalanches.com ikpo okwu ọrụ na-esichara site snow LP na-anọchi anya ihe a onye na-aha n'okpuru iwu nke Republic of Ireland, na ya edebanyere ọrụ na Office 29, Clifton House, Fitzwilliam Street Lower, Dublin 2, D02 XT91 (nke dị n'ihu - ụlọ ọrụ). Companylọ ọrụ ahụ bụ onye nwe Data Base nke na -echekwa Avalanches.com Personal User Data.
Data onye ọrụ nke Avalanches Project nwere ike ịhazi ya
Ozi dị ka adreesị ozi -e onye ọrụ ma ọ bụ akara ekwentị na okwuntughe dị mkpa maka ịmepụta akaụntụ. Ọ gaghị ekwe omume ịghọ onye ọrụ avalanches.com na -enweghị ịkekọrịta ụdị data a.
Ozi ọ bụla nke ndị sonyere nyere afọ ofufo, nkeonwe, na nke metụtara otu onye ka a na -ahụta dị ka data nke onye so na ya. Ndị ọrụ anyị na -ebu ọrụ zuru oke maka data nkeonwe ha nyere na avalanches.com.
Ekwesịrị ịnye nọmba ekwentị iji nyochaa onye ọrụ wee nye ohere ịnweta ụdị ọrụ anyị niile.
A na -ahụta data nkeonwe nke onye sonyere na -ahazi ka data ọ bụla enyere n'oge ndebanye aha ma ọ bụ na -eji akụrụngwa. Ndị sonyere na saịtị ahụ na-ebunye ma bipute data, gụnyere ozi a na-ebuga na Resource sitere na ọrụ ịntanetị ndị ọzọ ma ọ bụ netwọkụ mmekọrịta (e-mail, foto, aha, okike, afọ, ogo agụmakwụkwọ, wdg).
A na -ejikwa data a na -ebunye na Project na -akpaghị aka mgbe ị na -eji saịtị ahụ maka nhazi. A na -ebunye data site na ngwanrọ nke onye ọkpụkpọ etinyere na ngwaọrụ ya. Akụrụngwa na -enweta ozi na -akpaghị aka:
Adreesị IP onye otu
data sitere na kuki;
teknuzu nke ngwa onye ọrụ;
ozi gbasara ngwanrọ nke onye so na ya bụ oru ngo ji;
ụbọchị na oge ịnweta Avalanches;
akụkọ ihe mere eme ojiji na arịrịọ ibe, yana ozi ndị ọzọ nwere ụdị ya.
Ọrụ Avalanches anaghị enyocha izi ezi nke data nke onye ọrụ nyere. Mgbe ị na -eji ma na -edebanye aha na oru ngo a, ndị sonyere na -ekwe nkwa izu oke na nkwekọrịta ozi enyere na mmadụ.
Onyinye na nkwekọrịta: Iji rụọ ọrụ dị ka ikpo okwu maka azụmahịa azụmaahịa, mgbanwe mgbanwe, ma ọ bụ inye onyinye, Platform nyere ikike igosi ozi kọntaktị onye ọrụ, nke dị mkpa ịmalite nkwekọrịta n'etiti onye na -azụ ahịa na onye na -ere. Ndị ọrụ nwere ọrụ zuru oke maka ozi kọntaktị enyere na weebụsaịtị. Onye ọrụ kwesịrị ịma na enwere ike ịnye ozi kọntaktị ya ma ọ bụ ọbụna adreesị ụlọ ya n'ihu ọha na Platform anyị ka anyị wee nwee ike ịmekọrịta azụmahịa.
Mgbe onye ọrụ nwetatụrụ nkwado Platform, Platform na -ejigide ikike ịrịọ maka ozi nkeonwe iji wee nyochaa onye ọrụ ahụ.
Avalanches na -enye data onye ọrụ sitere na profaịlụ mpụga nke ejiri debanye aha profaịlụ onye ọrụ na avalanches.com site na iji ọrụ nyocha (Facebook, Google, wdg).
Ebumnuche nke nhazi Avalanches Resource bụ:
Ịmata onye so na Project a, yana maka nkwekọrịta na nkwekọrịta ya na akụrụngwa.
Inye oke ọrụ na mmejuputa nkwekọrịta ma ọ bụ nkwekọrịta dị iche iche na onye so na ya.
Nkwurịta okwu na onye ọrụ, gụnyere arịrịọ na ọkwa, yana izipu ozi na -achịkwa ojiji saịtị ahụ, mmezu nke nkwekọrịta na nkwekọrịta, yana nhazi ngwa na arịrịọ sitere n'aka onye so na ya.
Ịkwalite ogo Resource, arụmọrụ ya, ọdịnaya na ọdịnaya ozi.
Ịmepụta ihe nkwado ezubere iche na ndị na -ege ntị nwere mmasị.
Nchịkọta data maka ọmụmụ ihe dị iche iche, gụnyere mgbakọ na mwepụ, dabere na data amabeghị.
Ozi nke Avalanches anaghị ahazi ma ọ bụ chịkọta
Data onye ọrụ gbasara ihe nketa agbụrụ, echiche ndọrọ ndọrọ ọchịchị ma ọ bụ okpukperechi, isonye na ndị otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị, otu ndị ọrụ, wdg.
Ụzọ, usoro, na ọnọdụ maka ịhazi data onye ọrụ
Avalanches Resource na -anakọta naanị data nke ndị sonyere nyere afọ ofufo n'oge ndebanye aha ma ọ bụ nyocha na webụsaịtị Avalanches ma ọ bụ site na akaụntụ nke ọrụ ịntanetị ndị ọzọ, yana data a na -ebuga na -akpaghị aka na Resource site na ngwaọrụ na ngwanrọ nke onye sonyere na. usoro iji saịtị (kuki na ụdị data ndị ọzọ akọwapụtara na amụma nzuzo).
Oke mmiri na -edobe nzuzo data site na ụkpụrụ dị n'ime.
A na -edobe nzuzo data, ewezuga n'ọnọdụ ndị Onye ọrụ ji aka ya kweta ikpughere ụfọdụ ozi maka ịnweta ọhaneze na saịtị ma ọ bụ site na ọrụ ya.
Ọnọdụ nke ibufe data onye ọrụ na ndị ọzọ
Enwere ike ịmefe data onye ọrụ na ndị ọzọ na ọnọdụ ndị a:
Onye ọrụ ahụ ekwenyela ka mbufe akụkụ nke data ya.
Maka iji arụ ọrụ arụ ọrụ nke akụ ma ọ bụ mmezu nke nkwekọrịta ma ọ bụ nkwekọrịta.
Nyefe dị mkpa iji nye ndị sonyere ọrụ ma ọ bụ ọrụ nke Resource nke ndị mmekọ saịtị nyere site na teknụzụ. Enwere ike ibufe data nkeonwe maka nhazi ma ọ bụ nweta ebumnuche, nke nkwekọrịta Onye ọrụ na ọrụ ndị kwekọrọ.
Iwu nke obodo onye ọrụ nke ọ bụ bi na ya nyere ya maka mbufe a ma ọ bụ na ọdabara n'ụzọ ọzọ.
Ndị ọzọ nwere ike nyefee na data nkeonwe enwetara n'oge ụdị ọmụmụ ma ọ bụ nha dị iche iche, gụnyere ọnụ ọgụgụ, maka nyocha na inye ọrụ ma ọ bụ rụọ ọrụ na ntuziaka nke Project ahụ;
Akụ a na -ebelata ohere enwere ike ịnweta data nke ndị sonyere, na -emepe ohere naanị maka ndị ọrụ saịtị na ndị mmekọ chọrọ ozi a iji rụọ ọrụ ma ọ bụ hụ na arụrụ ọrụ nke ọma.
Ọnọdụ nke ịnweta data Onye ọrụ site n'aka ndị ọrụ ndị ọzọ
Onye ọrụ Platform ọzọ nwere ike nweta data onye ọrụ na ngalaba ngosi nke webụsaịtị avalanches.com iji bido nkwekọrịta n'etiti ha abụọ. Ozi dị otú ahụ nwere ike ịbụ ihe ọ bụla karịa ozi kọntaktị (adreesị ozi -e, akara ekwentị, ma ọ bụ njikọ mgbasa ozi mmekọrịta) na adreesị ebe.
Platform nwere ikike ịkekọrịta data onye ọrụ nzuzo na ndị ọchịchị dịka iwu mpaghara siri dị: ịkwụsị ma weta ndị ọrụ aghụghọ, na -ewepụ nghọtahie, ma ọ bụ kwado arụmụka nwere ike/mebie iwu mpaghara. Ọzọkwa, Platform nwere ike kpughee data onye ọrụ site na ịchọpụta ebumnobi ha na -akwadoghị na -eme na weebụsaịtị ma ọ bụ site na ịnweta mkpesa sitere na ndị ọrụ ikpo okwu ndị ọzọ.
Nchekwa, nhichapụ, na ngbanwe nke data onye ọrụ
Onye ọrụ ahụ nwere ikike na ikike n'oge ọ bụla iji saịtị ahụ iji gbanwee akụkụ ya ma ọ bụ kpamkpam site na iji ọrụ ndezi akaụntụ mgbe ị na -eleta akaụntụ nkeonwe.
Onye ọrụ nwere ikike na ohere n'oge ọ bụla iji hichapụ data ya nyere ya mgbe ọ na -edebanye aha na webụsaịtị Project site na ihichapụ akaụntụ. Agbanyeghị, nke a nwere ike ibute mmachi ohere onye sonyere na ọrụ ụfọdụ saịtị ahụ.
A na -echekwa data nkeonwe n'oge niile ị na -eji akaụntụ ahụ na saịtị ahụ. Ọ na -echekwa data na -anaghị achọ onye sonyere aha ma ọ bụ ihe ọ bụla nwere nkwekọrịta ma ọ bụ nkwekọrịta. Nkwụsị nke ojiji na nkwụsị nke nkwekọrịta onye ọrụ nke akaụntụ ahụ na webụsaịtị Resource ka a na -ahụta ka ọ bụ eziokwu nke nhichapụ akaụntụ onye otu ahụ.
Mbadamba, kuki, netwọkụ mmekọrịta
Ibe nke Project na -anakọta ozi na akpaghị aka maka iji arụmọrụ saịtị ahụ site na iji kuki. Achọpụtara data enwetara site na enyemaka ha iji nye ndị sonyere ọrụ nkeonwe, melite, mepụta mkpọsa mgbasa ozi, yana ịme ọmụmụ dị iche iche.
Enwere ike ịnye ojiji ụfọdụ ọrụ nke akụrụngwa naanị ma ọ bụrụ na -anabata ma nata kuki. Ọ bụrụ na onye sonyere machibido nnata ma ọ bụ nnabata kuki site n'ịgbanwe ntọala ihe nchọgharị, ịnweta ọrụ saịtị dị otú a nwere ike bụrụ nke a kpaara ókè.
Enwere ike iji kuki na mpempe akwụkwọ etinyere na ibe webụsaịtị Project iji nakọta, hazie, wee nyochaa ozi enwetara na mmekọrịta nke ndị sonyere na webụsaịtị ahụ, iji hụ na arụmọrụ nke ọrụ ya ma ọ bụ n'ozuzu ya. Ntọala teknuzu nke mita ahụ bụ nke oru ngo setịpụrụ ma enwere ike gbanwee ya na -enweghị ọkwa onye ọrụ.
Dịka akụkụ nke ọrụ saịtị ahụ, enwere ụdị netwọkụ mmekọrịta dị ka bọtịnụ "Ekekọrịta" yana mmemme mmekọrịta maka ịza ajụjụ na nsuso mmeghachi omume nke ndị sonyere na ozi enwetara. Ihe nke netwọkụ mmekọrịta na -edebanye aha adreesị IP nke onye ọrụ, ozi gbasara ọrụ ya na mmekọrịta ya na webụsaịtị Resource, yana chekwaa kuki iji hụ na arụ ọrụ nke ihe ndị a yana obere mmemme. Mmekọrịta nke Onye ọrụ na ụdị netwọkụ mmekọrịta na -achịkwa iwu nzuzo nke akụrụngwa na ụlọ ọrụ na -enye ha.
Usoro Nchedo Data Onye ọrụ
Akụrụngwa na -ewere usoro teknụzụ na nhazi iji hụ na ọ dị mkpa maka nchekwa nke data onwe na nke nzuzo site na omume megidere iwu nke ndị ọzọ ma ọ bụ malware, dịka ọmụmaatụ, mbibi, igbochi, mgbanwe, nomi, nkesa ma ọ bụ nnweta mberede, na ndị ọzọ.
Iwu obodo nwere ike imetụta mgbanwe nke Iwu ahụ ma ọ bụ ihe achọrọ nke iwu mba ụwa.
Akụ ahụ nwere ikike idezi amụma ugbu a. Mgbe a na -eme mgbanwe kwesịrị ekwesị na mbipụta nke ugbu a, ụbọchị nke mmelite ikpeazụ ya ka egosiri. Mbipụta ọhụrụ a ga -amalite site na mgbe ebipụtara ya na saịtị ma ọ bụrụ na nke a emegideghị ụdị Iwu ahụ yana iwu nke obodo ebe nnweta webụsaịtị Project ahụ mepere.
Ndị editọ akụ nwere ikike ịghara ibipụta ọdịnaya (edemede, nkwupụta, nkwupụta, wdg) nke enwetara n'aka onye ọrụ, ma ọ bụrụ na ndị editọ ọrụ nwere ike were ozi nke onye ọrụ debere dị ka oku nwere:
ịkpalite esemokwu agbụrụ ma ọ bụ agha;
mmetọ uche ma ọ bụ nke anụ ahụ;
ọrụ nke iyi ọha egwu, imebisị, nnupụisi obodo;
ịzụ ahịa mmadụ, ịgba ohu, ma ọ bụ ihe na -akpali agụụ mmekọahụ.
Ndị editọ nwekwara ikike ịghara ibipụta ozi ọ bụla ọzọ nke mebiri usoro iwu obodo nke onye ọrụ ma ọ bụ iwu mba ụwa.
Ibu ọrụ nke onye ọrụ na onye ọrụ
Ozi ọ bụla onye sonyere na -ebipụta na saịtị n'aha ya, ọ na -etinye na webụsaịtị Project n'afọ ofufo. A ga -ebipụta ozi ma ọ bụrụ na onye sonyere na -enye ikike SMS na nkwenye nke ọnọdụ mpaghara ya site na nkwekọrịta na iwu maka idobe akụrụngwa. N'ọdịnihu, onye so na ya ga -ahụ maka izi ezi nke ihe ebipụtara n'onwe ya.
Ndị editọ nke Project ahụ abụghị maka izi ezi nke ozi edepụtara na saịtị ahụ.
Iwu nke Project na -amachibido nomi na ikenye na ibe ozi ozi nke dara n'okpuru iwu nwebiisinka.
Iwu akụrụngwa na -amachibido i copyomi na ikesa ozi site na ibe webụsaịtị Project na -enweghị ihe ọmụma na nkwenye nke onye dere ya.